Ciidamada Imaaraadka Carbeed oo furtay markab ay budhcad-badeed Soomaali ah dalkaas ka afduubeen. – Radio Daljir
Ciidamada Imaaraadka Carbeed oo furtay markab ay budhcad-badeed Soomaali ah dalkaas ka afduubeen.
Abu Dhabi, April 03 – Wasaaradda gaashaandhiga ee dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in ay milatariga dalkaasi maanta ay dib ula soo wareegeen markab laga leeyahay waddankaas oo ah nooca saliidda qaada, kaas oo maalintii Jicmihii (darraad) ay budhcad badeed Soomaali ah ka afduubeen xeebaha bari ee dalka Cumaan.
Markabkan ayaa marka ay budhcaddu weerarka la beegsadeen ku sii jeedey marsada Jebel Cali, waxana uu ka yimid dalka Australia, halkaas oo uu saliid geeyey.
Ciidamada Imaaraadku waxa ay sheegeen in ay soo furashada markabkaas u adeegsadeen dayuuradaha qumaatiga u kaca, iyo cutubyo ka mid ah ciidamadooda badda, isla markaana ay gacan caawimaad ah ka helayeen ciidamada Amerikaanka ah ee uu saldhiggoodu yahay waddanka Baxrayn.
Sarkaal u hadlay wasaaradda gaashaandhigga ee Imaaraadka Carbeed ayaa sheegey in aanay jirin cid wax ku noqotay hawgalkaas, isla markaana maxkmad la horgayn doono budhcaddaasi. Sarkaalkan ayaa ka gaabsaday tirada budhcadda ee hawlgalkan lagu qabtay.
Markabkan ayaa la xaqiijiyay in ay iska leedahay sharikadda shidaalka Imaaradka Carbeed ee ADNOC.